musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Hawaii Kupwanya Nhau » Hoteli dzeHawaii dzinozvisarudzira inodarika $ 1 bhiriyoni mukurasikirwa
Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hawaii Kupwanya Nhau • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • Musangano Weindasitiri Nhau • nhau • vanhu • Kuvakazve • Resorts • Kutarisirwa • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • USA Kuputsa Nhau
Sezvo mahotera eHawaii ari kutsigira kurasikirwa kukuru, Vamiririri veUS Case naKahele vanobatsirana bhiri.
Hawaii hotera yebhizimusi mari yekufambisa inofungidzirwa kuve pasi makumi manomwe nenomwe muzana muna 77 zvichienzaniswa nematanho e2021.
Kufamba kwebhizinesi, uko kunosanganisira vemakambani, boka, hurumende, uye zvimwe zvikamu zvebhizimusi, ndiyo indasitiri hombe muhomwe yemari inowanikwa.
Mahotera anotarisirwa kupera 2021 pasi angangoita mazana mashanu emabasa achienzaniswa ne500,000, kusanganisira anopfuura 2019 akarasikirwa mabasa muHawaii.
Hawaii mahotera inofungidzirwa kurasikirwa ne $ 1.18 bhiriyoni mubhizimusi rekufambisa mari muna 2021, pasi 77.4% uchienzaniswa nematanho e2019, maererano nemushumo uchangobva kuitika kubva ku American Hotel & Yekugara Association (AHLA).
Mahotera munyika yose anofungidzirwa kupedzisa 2021 pasi anodarika $ 59 bhiriyoni mubhizimusi rekufambisa mari zvichienzaniswa ne2019 mushure mekurasa angangoita $ 49 bhiriyoni muna 2020.
Ongororo nyowani inouya pazvikamu zveongororo yeAHLA ichangoburwa, iyo yakawana kuti vafambi vazhinji vari kudzima, kudzikisa, uye kudzosera nzendo pakati pezvinonetsa zveCONVID-19.
Kuti vawedzere hupenyu hwevashandi vepahotera uye vape rubatsiro runodiwa kuti vararame kusvikira mafambiro adzoka kumatanho epamuviri, Vamiririri veUS Ed Case (HI-01) naKaiali'i Kahele (HI-02) vasaina sevamwe vanotsigira ku iyo Save Hotel Jobs Act, mutemo parizvino pamberi peCongress iyo yaizotungamira 100% yemari yayo kuchengetedza vashandi vemuhotera pamubhadharo.
Kufamba kwebhizinesi, uko kunosanganisira makambani, boka, hurumende, uye zvimwe zvikamu zvebhizimusi, ndiyo indasitiri hombe muhomwe yemari uye haitarisirwi kusvika padanho reropa kusvika gore ra2024. Kushaikwa kwekufamba kwebhizimusi uye zviitiko zvine mhedzisiro huru pabasa, uye inosimbisa kukosha kwekutarisirwa kwakatemerwa federal, senge Save Hotel Jobs Act.
Mahotera anotarisirwa kupera 2021 pasi angangoita mazana mashanu emabasa achienzaniswa ne500,000, kusanganisira anopfuura 2019 akarasikirwa mabasa mu Hawaii. Kune vese vanhu gumi vanoshanda zvakananga pane imwe nzvimbo yehotera, mahotera anotsigira mamwe mabasa makumi maviri nematanhatu munharaunda, kubva kumaresitorendi nekutengesa kumakambani anotengesa mahotera - zvichireva kuti mamwe mabasa anotsigirwa nehotera anosvika miriyoni imwe chete nemazana matatu ari panjodzi nyika yese kunze kwekunge Congress yaita.